!!!"Inspired by WORDS"-Own-Collection -"रचना"!!!: !!! कति दिन पो बित्छ र यस मान्छेसँग ? !!!
!!! कति दिन पो बित्छ र यस मान्छेसँग ? !!!
''हैन यो त भागमात्र बसी त, के भएको छ तँलाई ?" आमाको प्रश्न थियो। बोलिनँ, लागेँ कोठातिर।
यस्तो सोच्ता मन अलमल्ल पर्थ्यो। त्यससँग नबिते, कससँग बित्छ त जीवन ? तर त्यसको कुनै उत्तर थिएन तथापि मनमा बारम्बार दह्रो गरी एउटै कुरो दोहोरिरहन्थ्यो - ''त्यससँग मेरो कति दिन पो बित्छ र ?" भनेकै समयमा बिहे भयो र धुमधामले भयो। लुगाफाटा, गरगहना माइतीपट्टिबाट पनि प्रशस्तै थियो, बेहुलापट्टिबाट पनि। साथीहरूले ''ब्युटी पार्लर'' मा लगी राम्री पार्ने भएभरको प्रयत्‍न गरेका थिए तर मनमा भने कुनै प्रसन्नता थिएन। जिस्क्याउँथे- त्यसले मलाई कुनै लाजजस्तो पनि लाग्दैनथ्यो। बरु हेर न, म तिमीहरू सबैलाई के गरेर देखाइदिँदी रहिछु भन्ने लाग्थ्यो मनमा तर त्यो के गर्ने भन्ने चाहिँ टुङ्गो थिएन। यो निश्चित गरेकी थिएँ कि ऊसँग मेरो धेरै दिन बित्‍नेवाला चाहिँ थिएन।
उनी मेरो कुनै उत्तर नपर्खी जुरुक्कै उठेर हिँडिन्। राम्री अनुहार पनि ठम्याउन पाएकी थिइनँ। पछाडिबाट मात्र देखेँ एक क्षण ढोकाको चुकुल नखोलुन्जेल। मन नपरेको मान्छे कसरी मन पर्छ ? केही गर्दा पनि मन परेन ऊ मलाई। हेर्दा साह्रै घिनलाग्दो, नराम्रो पनि थिएन। पहिलो सोचेजस्तो बल्ड्याङ्ग्रे पनि होइन रहेछ। हातगोडा, जीउडाल पनि खोट लगाउनुपर्ने थिएनन्। धेरै नबोल्ने, बलैले बेलाबेला मुसुक्क हाँस्‍ने, बिस्तारो बोल्ने, कामका कुरो मात्र गर्ने रहेछ स्वभाव। दुईजनामात्र भएको त्यत्रो घरमा सुनसानजस्तो लाग्थ्यो। घरका चोटाकोठा कताकताबाट टुलुटुलु हेरिरहेका देख्थेँ। त्यसका आँखा बाणझैँ भएर शरीरका खासखास अङ्गमा गाडिएझैँ लाग्थे। रातरातभरि अन्धकारले थिच्थ्यो, पहाडले किच्थ्यो। छटपटाउउँदै उज्यालो पार्थेँ। रिस उठ्थ्यो।
पालैपालो मन नगर्दानगर्दै तीनओटा सन्तान जन्मिए। पछिल्लोपल्ट जन्मेकी थिई छोरी। त्यसलाई देखेपछि भने मनमा बेग्लै खालको मायाजस्तो पलाएको थियो। नत्रभने अघिल्ला दुवै छोराहरू मलाई प्लास्टिकका खेलौनाजस्ता लाग्थे। नियमानुसार दूध चुसाउँथेँ, सफासुग्घर गर्थेँ, काखमा लिन्थेँ तर तिनीहरूप्रति कहिल्यै उस्तो माया जागेन। तिनलाई काखमा लिइरहँदा तिनका बाबुका अनुहारमा आँखा नाच्थ्यो र भुईँमा राखिदिन्थेँ रुवाउँदै। मनमा लागिरहन्थ्यो - ''कति दिन पो बित्छ र त्यससँग मेरो।''रोइरहेका छोराहरू बोकेर फुल्याउँदै हिँड्थ्यो ऊ।